Uhlalutyo lweSplashdrone 3+ ngeSpanish, idrone engamanzi kaSwellPro | Iindaba zeGajethi
Namhlanje sikulethela iActualidad Gadget uphononongo lwedrone I-Splashdrone 3+ nguSwellPro, idrone engangeni manzi ekwazi ukubhabha phantsi kweemeko zemozulu ezimbi kakhulu kwaye ethe ngenxa yeempawu zayo ilungele ukuziqhelanisa ecaleni kwezemidlalo yamanzi, elunxwemeni okanye nokuba ngumncedisi wokuloba elwandle. Yimodyuli, icwecwe, iqinile kwaye ayikhanyisi ukukhanya kwesixhobo sobukhulu kwaye ibonakala ikakhulu ngombala wayo o-orenji oqaqambileyo kunye nokubonelela ulingo olulula. Ixabiso layo lesiseko yi- $ 1.200 kwaye Ungayithenga ngqo kwikhonkco. Emva koko siza kubona zonke iinkcukacha zefayile ye- I-Splashdrone 3+.
1 Idrone engenamanzi yokusebenza emanzini
2 I-Splashdrone 3+ kulula kakhulu ukuba idityaniswe
3 Splashdrone 3+ Izixhobo
4 Umthumeli + i-FPV Goggles
5 Ukuvavanya i-Splashdrone 3+
7 Isiphelo malunga ne-Splashdrone 3+ drone
8 Unxibelelwano lokuthenga
9 I-Splashdrone 3+ ividiyo ye-drone engenamanzi
11 Inzuzo kunye nexabiso
Idrone engenamanzi yokusebenza emanzini
Into yokuqala ekubethayo xa ubona idrone kukuba izindlu zayo azinamanzi kwaye Ikhusela zonke izinto ezibalulekileyo zedrone ngenqanaba elifanelekileyo lokuqina. Ekuphela kwento eshiyekileyo ingatyhilwanga ziinjini kwaye ezi zilungiselelwe ngokupheleleyo ngefilimu ebakhusela kumanzi anetyuwa ukuze isixhobo sikulungele ukuhlala emhlabeni kwaye sisuke emanzini ngaphandle kwengxaki enkulu, simanzi okanye sitshone kancinci.
Ndiyabulela kwezi mpawu, idrone yenzelwe ngokukodwa imidlalo yezamanzi, ukuloba okanye nomsebenzi wokuhlangula ngenxa yomlobokazana obandakanywe ecaleni kwekhamera kwaye siza kubona kamva.
Ngaba uyafuna ukonwabela iSlashdrone 3? Kulungile ngoku Ungayifumana ngexabiso elifanelekileyo ngokuchofoza apha >>
I-Splashdrone 3+ kulula kakhulu ukuba idityaniswe
Indibano yeSpllashdrone 3+ ilula kakhulu ukuyenza kwaye sinako ukuyilungela ukubhabha kwimizuzu embalwa. Ngokusisiseko into ekufuneka siyenzile yile:
nyusa izixhobo zokufika Yenziwe ngeetyhubhu ezimbini zekhabhoni ezifakwe kwimingxunya kwisiseko sedrone. Ukuzibeka ngokulula, kuya kufuneka kuqala ufake icala elinye embindini, emva koko ufake kwelinye icala kwaye ucinezele ngobunono kude kube kufakwe zombini de kube sekupheleni. Yindlela elula yokumisa kodwa inyani kukuba ukukhanya kakhulu kwaye kuyifezekisa injongo yayo.
beka izinto ezihamba phambili. Ukwenza oku kufuneka sicinezele abaqhubi kancinci ukuya ezantsi kwaye senze ujikelo oluncinci ngokulandela izikhombisi ezitsaliwe kwiirotors.
vula ikhava ephezulu yedrone ukuya beka ibhetri ngaphakathi. Iza ixhotyiswe nge-velcro encinci ukuyibamba ngokugqibeleleyo kwaye iyithintele ekuhambeni nasekusiqiniseni ngexesha lokubhabha.
beka i-gimbal ngekhamera ye-4k. Ukubekwa kwayo kulula kakhulu kuba kufuneka uyixhume kwindawo ehambelana nayo kwaye uyikhusele ngepini ukuze kwimizuzwana embalwa ungatshintshisa isixhobo esinye xa kukho imfuneko.
Yiyo ke loo nto, ngokulandela la manyathelo ama-4 alula sele sinedrone ekulungele ukubhabha kunye nazo zonke iziqinisekiso.
Splashdrone 3+ Izixhobo
Ukuququzelela ukuhanjiswa kunye nokugcinwa, i-drone iboniswe kwimeko eqinile, eyomeleleyo kunye neyilwe kakuhle. Kwivenkile ekwi-Intanethi ye-SwellPro ungabona izinto ezahlukeneyo kunye neentlobo zeekhamera onokuyisebenzisa ngeSlashdrone 3+. Imveliso iza nezinto ezine ezigqityiweyo: ukuloba, ukufota, ukuhamba ngeenqanawa kunye nokukhangela kunye nokuhlangula ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Kwimeko yethu Sivavanye ikhithi yokukhangela kunye nokuhlangula eza nomthwalo-wemodyuli-3 oqukethe imodyuli Ikhamera ye-4k inyuswe kwi-axis gimbal enye kwaye oko kubandakanya ne isixhobo sokuqalisa esincinci ngohlobo lwehhuku onokuthi uhambise ngalo kwaye uqalise ngezinto ezisemoyeni. Njengoko ayinakuba yenye indlela, zonke izixhobo kunye neentambo nazo azinamanzi.
Ixabiso lemodyuli yokukhutshwa kwemithwalo ngekhamera ye-4K kunye ne-1 axis gimbal yi- $ 329 y ungayithenga ngokunqakraza apha.
Umthumeli + i-FPV Goggles
I-Splashdrone 3+ iza nefayile ye- Isilayiti esikhanyayo kakhulu kunye ne-ergonomic kubandakanya isikrini se-5-intshi yombala we-LCD ukuze sikwazi ukubona ikhamera ye-drone kwaye isibonelela nge-telemetry esisiseko eyimfuneko ngexesha lokubhabha okunje ngesantya sesixhobo, ukuphakama, ukutyekela, ukutshaja ibhetri, isisombululo sekhamera, ixesha lendiza, umgama malunga thina, njl.
Ngalesi sikhululo sinako lawula zombini indiza yedrone kunye neminye imisebenzi enjengokuqalisa ukurekhodwa kwekhamera, ukuthatha imifanekiso, ukuvula ikhonkco ukuze ulahle umthwalo, ucofe iqhosha lokubuyela ekhaya, njl.
Kunye novavanyo lwethu sikwanazo nezinye Iiglasi ze-FPV ngenqwelomoya yomntu wokuqala, ehambelana ngokupheleleyo nedrone kwaye eza ngombala ofanayo weorenji. Ezi ziglasi ziza zixhotyiswe ngesisombululo esiphakamileyo sesikrini se-LED esiza kukuntywila kulonwabo lwe-FPV. Iindleko zeggg FPV yi- $ 199 kwaye ungazifumana kule khonkco.
Ukuvavanya i-Splashdrone 3+
Idrone ibonelelwa ngeendlela ezahlukeneyo zokubhabha, ukuze ihambelane nazo zonke iimfuno:
Imo yeGPS: Le yimowudi yendiza emiselweyo kwaye ikuvumela ukuba ukonwabele ukuzinza kweenqwelo moya ngoncedo lweGPS.
Imowudi yenqanawa: Ngale ndlela uya kuba nakho ukuvavanya i-drone ngesandla esinye, kuba isixhobo siza kuhlala siphakamileyo kwaye usebenzisa i-jostick uya kuba nakho ukuyishukumisa ngokuthe tye ngendlela egudileyo kwaye ulawule ukurekhoda umgangatho ophezulu iividiyo.
Imowudi ye-ATTI: Yeyona ndlela i-agile kwaye eya kukuvumela ukuba ufezekise isantya esiphezulu senqwelomoya, kodwa ngokucacileyo ikwangoyena mngcipheko weengozi.
Ukongeza, iSplashdrone 3+ inendlela ekhethekileyo yokubhabha ebizwa ngokuba Ukuthamba + ngawo Siza kulawula inqwelo moya ngeenqwelo ezimbini ezinokubakho ibekwe phantsi kwe-jostick kwaye iya kusivumela ukuba silawule ngakumbi ukujikeleza kunye nolwalathiso lwedrone, ke bagqibelele ukonwabela ukubhabha ngokuchanekileyo kunye neevidiyo ezizinzileyo.
Kubo bonke abo bathandi bokulinga ngezicelo, idrone ivumela yongeza ikhonkco leGroundStation ukwenzela ukulawula isixhobo kwi-smartphone yakho. Ixabiso lalesi sixhobo yi- $ 99 (ungayithenga apha) kwaye ikuvumela enkosi kwisicelo I-Swellpro Bhabha sebenzisa iindlela ngeendlela zokubhabha ezikrelekrele ezinje ngomsebenzi othi 'ndilandele', ngokuzenzekelayo ubhabhe uye kwindawo eboniswe kwimephu, yenza isangqa kwindawo ethile, okanye ucwangcise indawo yokuhamba ngenqwelomoya ngemephu.
Apha sikunika i igalari enezo zonke iifoto zeSlashdrone 3+, izixhobo zayo kunye nemigogo yeFPV.
Isiphelo malunga ne-Splashdrone 3+ drone
I-Splashdrone 3+ i-modular drone engangeni manzi yi ukhetho olukhulu lokuthenga kubo bonke abo bafuna a isixhobo esinomsebenzi olungileyo, olula nolawulo olumelana namanzi. Uyilo lweemodyuli kunye nenani elikhulu lezincedisi zivumela isixhobo ukuba silungele iimfuno ezahlukeneyo, ngokuqinisekileyo ezimele ukonga okubalulekileyo.
Ukuba unomdla thenga idrone engangeni manzi esiye sahlalutya eli nqaku kunye zonke izixhobo, ungayenza ngale linki ilandelayo:
Thenga ikhamera ye-4k ene-axis gimbal enye
Thenga iiggs ze-FPV-S3
I-Splashdrone 3+ ividiyo ye-drone engenamanzi
Emva koko unako bona idrone Splashdrone 3+ isebenza kwenye yeevidiyo zentengiso yohlobo.
Izixhobo ezininzi ezikhoyo
Ixabiso lezixhobo ezithile liphezulu ngandlela thile
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Drones » Uhlalutyo lweSplashdrone 3+ ngeSpanish, idrone engenamanzi eSwellPro
Eyona midlalo ilishumi ilungileyo yokuphila kwiPC
Iinkqubo zokubeka iliso ekusebenzeni kweekhompyuter simahla